NOOCYADA UGU WANAAGSAN EE STRAWBERRY: SHARAXAADA - STRAWBERRIES
Strawberry wanaagsan! Iyadoo lagu raaxeysto, qof kastaa wuu cunaa, carruurta iyo dadka waaweyn. Astaanta noocan oo kale ah, nooca nooca macaan, mararka qaar leh dufnaan yar, marka laga reebo dhadhanka soo jiidashada, sidoo kale waa mid aad u faa'iido leh - waxay ka kooban yihiin fitamiino iyo macdan, birta, potassium, copper, magnesium, manganese. Lemon wuxuu ka hooseeyaa nuxurka vitamin C.
Cagaarshowgu waa in la cunaa oo la cunaa dadka qaba dhibaatooyinka dheef-shiidka; waxay kordhisaa rabitaanka cuntada. Waxaa lagula talinayaa in aad isticmaasho bukaanno badan oo qaba hypertensive oo ah atherosclerosis.
Waxaa jira noocyo badan oo kala duwan oo ah dhirta strawberry. Tusaale ahaan, kuwa aad u baahan tahay inaad soo ururiso midhaha sanadkiiba hal mar, kuwa kale - laba jeer, iyo waxaa jira noocyo kala duwan oo aad cuni karto miro goosashada sanadka oo dhan. Sidee looma helin halkan oo dooro noocyada kala duwan ee strawberries: urta, dhadhan fiican, iyo keenista ururinta ugu fiican.
Kala duwan ee noocyada strawberry
Noocyo ayaa loo qaybin karaa qaybaha soo socda:
Darenka - strawberries, mid ka mid ah noocyo hore, kaas oo koraa ee lagu koriyo. Waxay leedahay qaabka miro - qaab shinni ah, jidhku waa guduud mugdi ah, macaan. Goosashada noocyo kala duwan ayaa ugu fiican.
Alba - waxay noqon doontaa mid weyn, qaabka miro ayaa sidoo kale ku jira qaab shinni, miro waa guduud cas. Aan ka baqin cayayaanka iyo iska caabinta cudurada. "Alba" - waa wax aad u wanaagsan gaadiidka.
Kala duwanaanta Octave oo laga soo bilaabo Ukraine. Waqtiga beertu - dhammaadka Maajo. Cuntada kala duwan ee noocaan ah waa mid weyn. Cabbirka berry ah ee la beeray marka hore waa qiyaastii 40 garaam, inta hartay waa 12 garaam. Berry wuxuu yahay mid casri ah, adkaysi leh, jidhka cufan, mugdi guduudan guduudan, oo carafku wuxuu gurigaaga ka buuxin doonaa isla markiiba.
Clery - noocyo kala duwan, oo laga soo saaro jilayaal ka soo jeeda Talyaaniga, ayaa si wanaagsan loogu raraa meelaha fog. Caleemaha duurka waxay koraan cagaar madow, oo baadiyaha lafteedu waa dheer oo cufan. Berry waxay u egtahay oval, midabka waa cherry mugdi ah.
Roseanna - kala duwan tani waxaa sidoo kale lagu soo boodaa ee Ukraine. Buundada waxay leedahay dherer celcelis ahaan. Inflorescences ayaa caleenta caleenta ku duuban. Qaababka miro la jarjaray waxay la mid tahay dhibic, ama waxay yihiin qallayl. Waa casaan, dhadhanka macaan iyo macaan. Xilliga ugu sareeya, dhirtii ayaa la kobciyaa ku dhowaad siman.
Kama Iyo, halkan waa horeba waa fasal Polish ah. Berry waa caadi, leeyihiin qaab muuqaal ah, oo leh caraf joogto ah oo dhadhan aad u badan sida strawberries. Midabka berry waa madow. Kala sooc "Kama" waxay leedahay qarsoodi yar: miro macquul ah - tani waa strawberry caadi ah oo leh dhadhan macaan iyo dhanaan. Laakiin berry oo si buuxda u bislaaday, urta strawberries iyo dhadhan aad u badan sida.
Waqtiga Kokinsky waxay leedahay dhalid aad u sarreeya, miro-dhajinta goor hore, si siman u dulqaadaneysa dhaxan. Tilmaamayaasha ugu weyn waxaa ka mid ah: miro badan oo casiir leh oo casaan ah oo casaan ah, caleemaha ku jira waa cagaar mugdi ah, muuqaal ah oo casri ah. Dhirta Strawberry. Waxay qaabeyneysaa qaabkeeda marka la raacayo masaafo dheer.
Stolichnaya. Way fiican tahay in laga beerto gobollada halka ay ku jirto qoyaan la'aan. Kala duwanaanta miraha "Stolichnaya" ayaa marar dhif u ah cudurka. Strawberries macaan oo leh carafo qoto dheer, qaab ahaan u dhow ovalaha. Miraha waa weyn.
Honey waa marti Maraykan ah. Waxay leedahay wax yar oo ka mid ah miraha weyn, miisaanka strawberry waa 45 garaam. Midabka berry wuxuu ku kala duwan yahay midab casaan iyo casaan madow. Honey waa hogaamiyaha iibka.
Waxa kale oo xiiso leh in la akhriyo oo ku saabsan daryeelka iyo beeritaanka of currants cas
Noocyada ugu fiican ee Bisaylkiisa strawberry:
Webenil. Ingiriisi kala duwan. Daaqadiisu way dheer tahay midabyo casaan leh oo leh caarad fiiqan. Fasalka "Veben" waxaa loo qoondeeyey iska caabin aad u sareysa gaadiidka. Dalaggu waa weyn yahay, muuqaalkuna wuxuu u eg yahay berrinka ugu dambeeyey.
Masha. Waddanka waxaa loo aqoonsan yahay inuu yahay Moscow. Fasalka "Masha" waxaa loo qoondeeyey wax soo saar badan, oo dhif ah ayaa soo gaadhay cudurrada. Caleemaha on duurka waa ballaaran oo peduncles qaro weyn. Mid ka mid ah strawberry miisaamaan celcelis ahaan 120 grams. Waxay u dhadhan yihiin dhanaan-macaan, dhadhanka strawberries, kareysa.
Rusich. Dhadhanka nooca berry waa macaan iyo dhanaan. Waxay ka tirsan tahay noocyo udgoon oo u adkaysta oo u adkaysta abaarta si fudud.
Symphony Homeland ee noocyada kala duwan waa Scotland. Miraha strawberry waa kuwo waaweyn, xiran qaab muuqaal ah, oo leh dhadhan aan caadi ahayn. "Symfony" ayaa si dhif ah u soo baxa kallana cawl. Wanaagsan tahay bixinta, maaddaama midhaha ay u bislaadaan ku dhawaad ​​usbuuc.
Mid la doortay. Cagaarshow waxay bilaabaan inay heeso ka soo caarada iyo si tartiib tartiib ah kor ugu sareeyso midhaha.
Noocyada soo raaca:
Chamora Turusi waa mid aad u casiir leh oo macaan badan leh. Iyada oo waraabinta joogtada ah, waxay ku dhalinaysaa waqti dheer. Buundada waxaa lagu beeray meel fog oo ah 60 cm midba midka kale.
Chelsea oo ka fariistay Wadanka - England. Waxaa loo tixgeliyaa noocyada kala duwan ee strawberries, miraha ay yihiin kuwo aad u casiir leh oo dhadhan fiican leh. Sannaddii kowaad ee ka dib markii la beero, beergooysku waa yar yahay. Aad ayay u fiican tahay wadada.
Vicoda waa noocyo kala duwan oo Dutch ah. Strawberries qudhooda waa ladagaal iyo casiir leh. Waxay yihiin kuwo aad u weyn, leh midab madow. Ku adkeysi caaryada cad, oo ku dhowaad marnaba dhicin caleemaha.
Queen Elizabeth-2 waa nooc ka mid ah strawberry, taas oo aan ka cabsan cudurka iyo cayayaanka kala duwan. Badeeco sare, berry waa cufan iyo macaan, qaabka waa la jarjaray-qaabab-qaabeeya.
Noocyada Remontny ee strawberries maanta soo galaan meesha ugu horeeya, sababtoo ah waxay midho u dhali laba jeer sanadkii. Noocani wuxuu ku haboon yahay kobcinta dhulalka yar yar, waxaa mararka qaar lagu beeray sanduuqyada. Faa'iidooyinka waxaa ka mid ah wax-soosaarka sare iyo miraha waaweyn.
Noocyada ugu caansan ee remontant ee strawant yihiin:
Ada Isku dhafka noocyada kala duwan ayaa bilaabanaya in la goosto marka strawberries bartamaha xilliga caadiga ah lagu beeray, tan labaad - horay u dhacay August, iyo ka hor inta barafoobay. Qaabka nooca berry waa mid yar, midab cas oo leh. Iyadoo fasalka 1aad ee "Ada" waxaad ku soo ururin kartaa qiyaastii 130 kg.
"Dawn" waxaa loo tixgeliyaa noocyo kala duwan. Burburka waa dherer. Dhaqdhaqaaq yar oo dhadhan leh, casaan dhalaalaya. Kala duwanaantu waxay u dulqaadataa qabow, waxayna u baahan tahay waraabin dheeri ah.
Cunto kala duwan ee "Strawberry" Festival, oo leh habka saxda ah ee beerista dalagyada, waxay keeni doontaa wax-soosaarkooda sare. Midhaha foosha ee "Strawberry Festival" waa mid aad iyo aad u macaan.
Queen Elizabeth. Tani waa mid ka mid ah noocyada ugu macaan ee leh miraha waaweyn. Faa'iidooyinka kala duwan ee noocaan ah waa wax-soosaarkooda sare, iska-caabbinta berry-u-barafka, si fudud u dulqaadan karo cudurka. Dhinaca kala duwan ee Queen Elizabeth kala duwan waa in ay dhif ah u koraan shaarib ah, waana in ay u koraan iyada oo gargaar abuur ah.
Maxay yihiin shuruudaha isticmaalka marka la dooranayo fasalka
Strawberry waa warshad dilka ah. Doorashada kala duwan ee strawberries waa in ay tixgeliyaan xaaladaha cimilada halkaas oo ay koraan. Kadibna waa inaad u fiirsataa meesha aad qorsheyneyso inaad ku koriso strawberries. In kasta oo xaqiiqda ah in ay ku koraan ciidda, carrada madow mugdi ah iyo carrada madow waxay noqon doontaa mid raaxo leh. Sidoo kale waa in aan la beerin berry, halkaas oo heer sare ah oo dhulka hoostiisa ah. Waxay leedahay qoyaan badan.
On goobta waxaa lagu talinayaa in ay ku beeri dhowr noocyo kala duwan, iyo leh waqti kale goosashada.
Marka, doorashada strawberries ee guriga ama ganacsiga waa in ay fiiro gaar ah:
Wixii muddo ah ee Bisaylkiisa iyo goynta strawberries.
Nooca miro iyo cabbirka.
On gaadiidka of berry iyo ay ku adkeeynayaan.
Wixii ilaalin lagu kalsoonaan karo oo laga helo cudurada iyo cayayaanka.
On dhadhanka strawberries iyo sifooyinka nafaqada.
On tayada geedo.
Cadaadiska abaar iyo qabow.
Noocyo kala duwan oo strawberry: sharraxaad gaaban
Noocyada cagaaran ee ugu caansan suuqa ayaa waxaa ka mid ah:
Zenga Zengan Miraha noocyada kala duwan waxaa loo isticmaalaa barafka. Miraha halkii ay ka weyntahay. Kala duwanaanta noocaas ah ee Jarmalka.
Queen Elizabeth waa nooca ugu fiican ee strawberry remontant. Miraha laba jeer sannadkii. Wuxuu koraa carrada.
Nooca hore waa noocyada kala duwan ee strawberry Clery, taas oo si sahlan loo qaado.
Mucjiso Miracle Likhonosova Magaca kala duwan ee kala duwan ayaa ku hadla laftiisa. Haa, tani waa mucjiso dhab ah, berrinkaan waxaa si joogto ah loo ururin karaa.